कृष्ण गिरी बुधबार, साउन २१, २०७७
काठमाडौं– सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग बदला लिन खोजेको बताएका छन् । पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डले गठबन्धन र पार्टी एकता भएको केही समयसम्म राम्रो व्यवहार गरे पनि पछि बदला लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डले भने, ‘मैले सञ्चालन गरेका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी एकताबद्ध र सामूहिक निर्णयसहित अघि बढेकाले उनमा बदलाको भाव उत्पन्न भयो । बदलाको भाव केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि अझ बढी भयो ।’
मैले सञ्चालन गरेका सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी एकताबद्ध र सामूहिक निर्णयसहित अघि बढेकाले उनमा बदलाको भाव उत्पन्न भयो । बदलाको भाव केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि अझ बढी भयो ।
नेकपामा पछिल्लो समय विवाद चर्केसँगै नेताहरुले अलग अलग तरिकाले आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । १० असारबाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक विवादका कारण स्थगित भएको छ । यसै सन्दर्भमा पार्टीमा दुई धार आआफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विवाद चर्किँदै गएको छ ।
प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्ष स्थायी कमिटीबाट हल निकालौं भन्दै स्थगित स्थायी कमिटीको निरन्तरताको पक्षमा लागेका छन् भने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिवालयमा विवाद मिलाएर स्थायी कमिटी बैठकमा जाने अडानमा छन् ।
प्रचण्डले ओली पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको समयमै ओलीले निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता गर्न लगाउनुभयाे, त्याे पार्टी एकताको पक्षमा हो कि विभाजनको पक्षमा ? हामीले जसरी पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेर अड्डी कस्यौं । हाम्रा विरुद्ध सडकमा नाराजुलस गर्न लगाउनुभयो । अनि कसरी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ?’
हामीले जसरी पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्छ भनेर अड्डी कस्यौं । हाम्रा विरुद्ध सडकमा नाराजुलस गर्न लगाउनुभयो । अनि कसरी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ?
उनले ओलीले नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा जनतको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद भन्दै कार्यक्रम गरेर एकताविरोधी काम गरेको बताए । उनले भने, ‘स्थायी कमिटीका साथीहरु नै जबज जिन्दावाद भन्दै कार्यक्रम गर्न थालेपछि कसरी एकता दिगो हुन्छ । अझ आवश्यकता परे यही नामा पार्टी एकता हुन्छ भन्दै वडादेखि केन्द्रसम्म गुट सञ्चालन गरिएको छ । यो एकता विभाजन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।’
पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने अवस्था आए पनि त्यसका लागि सबैले मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्ने संकेत गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामी सधैं राम्रा परिस्थिति तयार गर्न लाग्नुपर्छ । तर सधैं परिस्थिति सोचे जस्तो हुँदैन । यसकारण कम्युनिस्टले खराबभन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि मानसिक रूपमा तयार रहनुपर्छ ।’
कम्युनिस्टले आफूभित्रको कमी कमजोरी सच्याएर रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टी व्यक्तिले नभएर सामूहिक नेतृत्वले सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै एक हुनुपर्ने बताए । अहिले पार्टी जबज र २१आंै शताब्दीको जनवाद र माओवादबाट होइन नेकपाको विधानबाट चल्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख होइन, नवउदारवाद उन्मुख छ । त्यसकारण, सरकार एमसिसी पास गर्न तयार छ । एमसिसी सम्झौतामै नवउदारवादतर्फ जानुपर्ने भनेर लेखिएको छ ।’
प्रचण्डले विधि र विधानबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने बहसमा लागेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पदका लागि भए ४ मंसिरमा आधा आधा सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्झौताबाट किन पछि हट्थें । म त कार्यकारी भए पार्टी विधि र विधानबाट सञ्चालन गर्छु भनेर सोचेको हुँ ।’
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २१, २०७७ १७:०६
मंगलबार, भदौ ३०, २०७७ ११:१९ नेकपाले जारी गर्यो अन्तरपार्टी निर्देशन – ५
सोमबार, भदौ २९, २०७७ २२:२७ गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय